राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति खिच्ने नेपाल ट्रष्टसँग करोडौं पैसा छ, खर्च गर्ने ठाउँ छैन
करोडौं पैसा छ, दिने ठाउँ छैन।
यो समस्या हो, नेपाल ट्रष्टको।
राजा वीरेन्द्रको परिवारको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको मातहत आएपछि ट्रष्टले वार्षिक करोडभन्दा माथि कमाइ गरिरहेको छ। नेपाल ट्रष्टको खातामा ४० करोड रुपैँया छ। त्यसको ब्याजबाट मात्र वार्षिक करोडभन्दा धेरै आय भैरहेको छ।
ट्रष्टको रकम अस्पताल सञ्चालन गर्न, जेहेन्दारलाई छात्रवृत्ति दिन, गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने भनिएको छ। त्यस्तो सहयोग अहिलेसम्म ट्रष्टले गरेको छैन।
गोकर्ण रिसोर्ट, टेकुको व्यापरिक मल ‘बिजनेस पार्क’, काठमाडौं प्लाजा लगायतबाट उठाएको भाडा र नबिल बैंक, होटल डेल अन्नपूर्णजस्ता कम्पनीको सेयरबाट हुने आम्दानी ट्रष्टको खातामा वर्षेनी थपिन्छ। २०७०/७१ मा ट्रष्टको खातामा २६ करोड ४५ लाख रुपैँया थियो। तर एक वर्षमै ७ करोड ६४ लाख आर्जन गर्‍यो। ट्रष्टको खातामा ३४ करोड ७ लाख पुग्यो। अहिले ट्रष्टको खातामा ४० करोड पुगेको छ। त्यो वर्ष ट्रष्टले ब्याजबाट मात्र १ करोड १३ लाख आम्दानी गर्‍यो।
तर खर्च भएको छैन।
‘खर्च गर्ने कुनै कार्यविधि नभएकाले आम्दानी र त्यसको ब्याज थपिएको थपियै भएको हो,’ ट्रष्टका सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले भने।
खर्च गर्ने कार्यविधि बनाउने सञ्चालक समितिले हो। उनकाअनुसार गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको यो ट्रष्ट सञ्चालक समिति बैठक एक वर्षदेखि बस्न सकेको छैन।
‘सञ्चालक समितिको बैठक २०७३ साउन ३ गते बसेको थियो,’ उनले भने, ‘खर्चको कार्यविधि लगायत १४ वटा प्रस्ताव पेश भएका थिए। तर आगामी बैठकमा निर्णय गर्ने भन्दै उठेको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन।’
गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिमा मुख्यसचिव उपाध्यक्ष छन्, गृह, अर्थ, कानुन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव पनि सदस्य छन्।
सञ्चालक समिति ‘मिनी क्याबिनेट’ छ, तर करोडौं पैसाको सदुपयोगका लागि कार्यविधि तयार गर्न सकेको छैन।
‘अब गरिब को हो? गरिबीको आधार के हो? अस्पताल कहाँ सञ्चालन गर्ने? कसरी गर्ने? बजेट भएर मात्र हुन्न कसरी काम गर्ने भन्ने विधि हुन पर्‍यो,’ कार्कीले भने।
बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा कयौँ काम अल्झिएको छ। काठमाडौंको दक्षिण ढोकामा ४० रोपनी जग्गा ‘युथ इन्टरनेशनल’ स्कूलले चलाएको छ। उसले लिज नवीकरण गर्न खोजे पनि ट्रष्टको सञ्चालक समिति नबस्दा निर्णय हुन सकेको छैन।
नेपाल ट्रष्टको ३८ औं बोर्ड बैठकले पोखराको रत्न मञ्जील र चितवनको दियालो बंगला पर्यटकका लागि खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
‘टिकट काउन्टर बनाउन, त्यहाँ ट्वाइलेट, पानी, सुरक्षा चेपपोस्ट निर्माणका लागि ४ करोड बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई मागेका छौं’, कार्की भन्छन्, ‘निकासा भएन, आम्दानी हुने ठाउँमा पनि अर्थ मन्त्रालय खर्च गर्न तयार छैन।’
राजा वीरेन्द्र, रानी ऐर्श्वर्या र उनीहरूको परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्नका लागि २०६४ मा ट्रष्टको स्थापना भएको थिए।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ४, २०७४ ०५:५३:०२